चासो कन्टिनेन्टल - जर्मनी ले ओटोमोबाइल टायर को दुनिया-प्रसिद्ध निर्माता। उत्पादन को मामला मा, कम्पनी दुनिया मा 4th स्थानमा स्थित छ। घोडा को रूप मा कम्पनी लोगो, आफ्नो हिंद खुट्टा मा रही, अहिले मात्र जर्मन सडक मा जताततै "कन्टिनेन्टल" टायर प्रयोग कहाँ ज्ञात छ, तर। अवस्थामा बहुमत यो ब्रान्ड को उत्पादनहरु को समीक्षा सकारात्मक छन्। थप रोचक आधार को इतिहास र कम्पनी को विकास सिक्न हुनेछ।
कम्पनी को मूल
GESELLSCHAFT हानोवर मा 1871 मा स्थापित भएको थियो। सुरुमा कम्पनी वाहनो र कोच लागि रबर टायर उत्पादन। यस समानान्तर, फर्म नयाँ उत्पादनहरु को परिचय गर्न लगातार अनुसन्धान सञ्चालन। चाँडै नै यस भनेर साइकल र त्यसपछि कारहरुको लागि pnevmopokryshek जारी स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ प्रविधिको विकास गर्न पुगे। 1904 मा, कम्पनी नयाँ आविष्कार संसार हैरानी। टायर "कन्टिनेन्टल" एक tread गरिएका गर्न थाले। कारण यो गर्न जर्मन कम्पनी मौलिक बाटोमा स्लिप को समस्या गर्न दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न पहिलो प्रमुख कम्पनी बन्यो। 20 औं शताब्दीको सुरुमा, बिजुली कम्पनीहरु संग काम गर्न recruited थिए रेसिङ कार। "कन्टिनेन्टल" कार को समर्थन संग डेम्लर फ्रान्स को महान् पुरस्कार मा प्रतिस्पर्धा को विजेता बन्यो। यो परिस्थितिमा जर्मन ब्रान्ड को एक indisputable अख्तियार गरेको छ। कम्पनी को कारोबार वर्ष द्वारा वर्ष वृद्धि।
सक्रिय विकास र नयाँ बजार विकास
1952 देखि, इस्पात बिक्री कार्य "कन्टिनेन्टल" बस एम + एस, जाडो अवस्थामा उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको छ। कम्पनी नयाँ प्राविधिक समाधान को लागि खोज छाडेनन्। र पहिले नै 1955 मा, त्यो उत्पादन प्रबन्ध tubeless टायर को। 1967 मा, यसको आफ्नै परीक्षण साइट Lüneburg मा जर्मन चासो पत्ता थियो। कम्पनी को विस्तार निष्कर्षमा गर्न देश बाहिर भनेर उत्पादन सुविधाहरु नेतृत्व। फ्रान्स संयंत्र अष्ट्रीया निर्माता Semperit टायर, पोर्चुगल मा भएको स्थापित काममा सहयोग सुरु, खरिद गरिएको थियो। 1990 को दशक मा, कम्पनी विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण कदम को एक नम्बर गरे। Barum खरिद गरियो चेक कम्पनी मा खम्बा नियन्त्रणमा र ITT इंडस्ट्रीज इंक को अमेरिकी ब्रान्ड प्राप्त हानोवर चासो संसारभरि कारोबार र पसलहरूमा किन्न जारी छ। उहाँले दक्षिण र मध्य अमेरिका मा साथै पूर्वी युरोप मा यसको गतिविधिहरु संगठित भएको छ। अब जर्मन औद्योगिक विशाल को उत्पादनहरु संसारभरि उपभोक्ताहरु थाह थियो। टायर "कन्टिनेन्टल"
यो अन्तर्राष्ट्रिय बजार मा गुणवत्ता को मानक भयो।
मोटर वाहन रबर को अग्रणी निर्माताहरु मध्ये एक - 21 औं शताब्दीमा कम्पनी Bridgetstone सँग सम्झौता को साइन संग थाले। संयुक्त विकास रन-फ्लेट प्रविधि गयो। परिणाम उत्पादनहरु को रिलीज punctures गर्न susceptible छैनन् थियो। व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट पाउन सकिन्छ बस "कन्टिनेन्टल» R16, यो प्रविधिले निर्मित। उत्पादन को नयाँ मोड को छानबिन जर्मन कम्पनी पटक संग गति राख्न जारी कि सुझाव। यसको उत्पादन गुणस्तर को मानक छ। टायर "कन्टिनेन्टल" सबै नवीन आधुनिक प्रविधि अवशोषित।
"मित्सुबिशी Outlander Agriaffaires को प्रचालन सामुराई" (मित्सुबिशी Outlander Agriaffaires को प्रचालन सामुराई): प्राविधिक विनिर्देशों, मूल्य, समीक्षा (फोटो)
जाडो टायर कसरी चयन गर्न। तपाईं ध्यान के गर्नुपर्छ
नयाँ "आँखा" कति छ? VAZ 1111 - एउटा नयाँ "ओका"
हल्ला इन्सुलेशन हुड डिजेल कार
Anastasia Skripkin: एक पुस्तक, एक वेबसाइट र फोटो संग चरण व्यञ्जनहरु गरेर राम्रो चरण
कुन 15 वर्षीया बच्चाले थाहा पाउनुपर्छ: 15 महत्त्वपूर्ण चीजहरू
कसरी "शब्द" मा लिङ्क बनाउने? नेभिगेशनको सुविधा सिक्दै
मासु र भात संग भरी को खुर्सानी कसरी खाना पकाउनु
Discordant जोडे: यो के हो?
Multicolored नङ सुशील वा छैन?
सर्वश्रेष्ठ जापानी लडाकूको। जापानी देखेर लायक छन् जो लडाकूको,
Disorganized सिंड्रोम: लक्षण र उपचार। psychopathological syndromes